7 Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful Ukuze Vakashela EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful Ukuze Vakashela EYurophu
Europe, izwe elihle ubukhazikhazi futhi inganekwane ngokungangabazeki yiya lendawo zonke zokuhamba enthusiast laphaya. Nge angenamkhawulo sibambe ongezansi Awakening izindawo ukuvakashelwa, IYurophu eyaziwa omunye amahle phesheya cwaningo Izikhumulo kubafundi International njengoba une-bounty naletingabaleki emabhishi, iziqhingi, izigodlo, izinqaba, futhi izikhumbuzo zomlando.
Akunakuphikwa ukuthi amadolobha afana eRoma futhi Paris ngamadoloba kumele ukuvakashelwa ngenkathi voyaging ngokusebenzisa Europe, kodwa uma ungomunye walabo abantu zijwayele ukuhlola i Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful sizindle ngenjabulo zonke nencane ubuhle amagugu afihliwe, kulolu hlu nje ngawe!
Nge lowo muntfu wathi, ukufunda kanye embule 7 izindawo understated eYurophu ukuthi kukhona breathtakingly amahle futhi ngeke spike ukuthi rush adrenaline owufunayo.
1. Lesser Izikhumulo Laziwa Beautiful – Valletta, Malta
Valletta kuyinto phakathi komncane kunabo Lesser Laziwa Beautiful Izikhumulo emadolobheni emhlabeni futhi iyikhaya zasebukhosini, izinqaba, futhi ababhishobhi ukuthi bahlehlela emuva ekhulwini le-16. Lo muzi ngokuphelele Ezweni Heritage Site njengoba kusho lukhulu ngenxa namazwi zomlando aphethwe
yiwo. Ingxenye best mayelana ukuhlola Valletta wukuthi elawula emhlabeni ndawo akukho msebenzi eziyinkimbinkimbi ukwenza njengoba enhlonhlweni kwanele encane ukuba ngokuphelele ehlanganiswa ngezinyawo. Ezinye nokuzwa ezinkulu ukuze ungalokothi uphuthelwe ngenkathi e Valletta kukhona Upper Barrakka Gardens Casa Rocca Piccola ukuthi ifa ukubukwa wena ongafela!
Salzburg itholakala emngceleni Germany, ezweni Austria futhi okungukuthi ukugonwa ngu echichima Eastern Alps ukuthi ngempela kwamehlo amehlo. Lokhu emangalisayo futhi Lesser Akwaziwa Beautiful Izikhumulo muzi lapho kwazalelwa Mozart, i-owayedume umculo umqambi, kabani
ebuntwaneni amathuluzi liyalondolozwa uboniswa Museum. Ngaphandle yayo nokubaluleka okungokomlando, emzini ehlotshiswe Baroque izakhiwo Kunesitayela - i isitayela ewubuciko kusukela ekuqaleni yekhulu le-17, ahlukane ngasemfuleni Salzach, okwenza ngokuvakashela kulumuzi travel isikhathi kuya yobudala medieval!
Yayiyini kanye umuzi wawushiywe yisikhathi, Constanta okwamanje Romania enkulu wesithathu idolobha kanye nomunye Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful eYurophu kanye itheku ememeza elisoGwini yasebhange yoLwandle Black.
Constanta iyikhaya aqinisekiswe eminingi ezidonsela izivakashi ngibuyela okweshumi ekhulwini, kuhlanganise Ovid Square, lapho isithombe sethusi umdwebi engumRoma u-Ovid imele, kanye ububusi Constanta Casino, okuyinto izici nesimo sesakhiwo esikhulu Art Noveau. Constanta ngokufanayo has cishe seashores kakhulu ajabulisayo, lapho kuthanda uthole ithuba ukuthamela ilanga futhi kuhlukaniswe kuze. Uma kwenzeka wena i entsha isimo, bangu multi usuku uhambo kusukela Constanta, okuyinto zihlanganisa ngokuvakashela ezimbili UNESCO Sites Heritage okungukuthi iDanube futhi Tulcea kanye eziphumulele ngasekupheleni ngesikhathi famous beach resort, Mangalia.
4. Lesser Izikhumulo Laziwa Beautiful – yaseGhent, Belgium
Afihliwe ngaphansi amathunzi kuyoyonke imiphakathi esiphawulekayo ngaphezulu Belgian ezisemadolobheni efana Antwerp kanye Brussels, YaseGhent kuyinto Igugu elifihlekile eBelgium. Nge amadolobha ezithakazelisayo futhi disorder kude kancane, YaseGhent kuncane ngokwanele ukuze uzizwe ukhululekile futhi ngokwanele elikhulu Spice up isipiliyoni sakho. Uma ziyazithanda iminyuziyamu kuhle, Amabha nemfashini, futhi i-canal ohlangothini ukubukwa, nakanjani ufuna ukwengeza yaseGhent uvakashe yakho uhambo. Ingxenye izindawo ayifanele indiva kuhlanganisa Gravensteen, mansion kwekhulu leshumi nge yeNayile nazo ukubukwa okumangalisayo, the Belfry iGhent kanye St Baro Cathedral.
Thola ukulungele bathakazeliswe yile raveled ingqalasizinda yokuzisiza eye yazibonakalisa isitimela kwesikhathi futhi wenze amakhamera yakho luqhephuke phansi salokhu Pick of Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful in Europe.
Brussels ukuze yaseGhent Izitimela
E-Antwerp liye yaseGhent Izitimela
Halle ukuze yaseGhent Izitimela
Bruges ukuba yaseGhent Izitimela
Stashed at imingcele Baltic, Helsinki yidolobha European okufanelekele ukuhlola. Echichima emisha, Helsinki kwaba Umhlaba yezakhiwo Capital ngoba 2012. isitayela wabo ngakho ukudunyiswa, zama ukuba novalo bese ujoyina abahambahamba ukuvakashelwa endaweni yedolobha ukuzwa umlando onothileko yenhloko-dolobha Finnish.
Cabanga ngokuvakashela Helsinki ngesikhathi esiphakade yayo izinsuku ehlobo zokuthuthukisa isikhathi sakho kukhona noma wagqoka gutsy yakho amabhuzu ulwe limbozwe ebusika kusihlwa. Noma kunjalo, kukhona ezifana amanani amakhulu izindawo ongazibona, ngeke zithole ithuba zembula ngokuphelele yonke imfihlo ngoba kunesithembiso!
Gothenburg, elise Sweden, iyikhaya Liseberg Funa epaki, okukodwa kwe ezikhangayo phezulu isizwe siqala engomunye wabayishumi Lesser Akwaziwa Izikhumulo Beautiful. Libuye idolobha lesibili ngobukhulu kuleli zwe okuyinto nangale ezihlekisayo ngenxa sokufaka yayo kokubili ezweni nasolwandle futhi etshiyeneyo yayo ngemiqondo efana 'Fika " (a sencwadzi ejabulela sekhofi) futhi Feskekorka (fish isonto) Zama ukuvakashela leli dolobha ngo-August okufakaza emangalisayo music festival zabo eyaziwa ngokuthi Way Out West. Akwenzeki uvakashele phakathi nalesi sikhathi? Idolobha ngeke nokho zizenze kuyinjabulo zonke izinzwa zakho ne sceneries amahle,
umunwe Licking ukudla, nasemigwaqweni ephapheme. Ngaphezu, ukuzula azungeze umuzi kungenziwa kwesokudla ngezinyawo zakho okuyinto izindlela ukuthi ulondoloze ku izimali abajikelezayo futhi ngesikhathi esifanayo isikhathi ujabulele awukudla ezenhlalo nezamasiko lo muzi esimangalisayo kufanele sipho.
7. Lesser Izikhumulo Laziwa Beautiful – Hlukanisa, Croatia
Hlukanisa kuyinto Croatia njengomgijimi ophelele Lesser Akwaziwa Izikhumulo Elihle iholidi uma zifunisisa okwesikhathi kungenzeki ugu idolobha ngokuxuba nge obandayo Mediterranean vibes. Cuisine lwaseDalmatia lapha kuhambisana kwasolwandle fresh ngeke ukumpotopotoza nisangulukile bese nawe ngamadolo wakho!
Ngaphezu kwalokho, uphumule Kastelet lolwandle ngeke kuyokuqeda ukucindezeleka sakho bese uvuselela wena ngokuba kusuka ngaphakathi. Uma ufuna isikhathi esithile induduzo, ungakwazi ukugibela isikebhe kusuka lapha ukuze saseHvar, isiqhingi elise emahora langaphasi kulangu-amabili basedolobheni. Sekukonke, Hlukanisa kuyinto iphakethe ephelele ngalo nakanjani kumelwe ukuhlola!
Ngakho, kuyini ukuthi balinde? Hlela uhambo lwakho eduze kwelinye lalawa Laziwa Izikhumulo Lesser Beautiful nge Londoloza Isitimela le mizi lovely futhi uyoba ukubonga kwethu kamuva, Happy wokujikeleza!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/lesser-known-beautiful-destinations/- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
ubuhle obuhle europedestitions ukwazi okungaphansi amancane smalldest